Odayaal dhaqameedyo lagu dilay duleedka degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in weerar ka dhacay duleedka degmadaas lagu dilay saddex ruux oo labo ka mid ah ay ahaayeen odayaal dhaqameedyo caan ka ah Gobolka.
Odayaal dhaqameedyadan ayaa maanta barqadii ka ambabaxay degmada Balanbale, iyagoo u joogay howlo la xiriiray maamul u sameynta iyo la tashi, waxaana gaari ay la socdeen lagu rasaaseeyay duleedka Balanbale.
Dabley hubeysan ayaa jidka u galay gaariga ay la socdeen Nabadoonadan oo ku sii jeeday degmada Guriceel, waxaana halka lagu weeraray ay u dhaxeysaa Balanbale iyo deegaanka Oodaale.
Wararka ayaa intaa ku daraya Meydka iyo dhaawaca loo soo qaaday degmada Balanbale, iyadoo meydka lagu aasay.
Lama oga cida ka dambeysay weerarkan, hase ahaatee waxaa la isla dhex marayaa inay ahaayeen dableyda weerarka ka dambeysay kooxo ka soo horjeeday Maamulka lagu dhisay Balanbale ee xalay lagu dhawaaqay.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Galmudug oo ku aadan weerarkan lagu dilay Nabadoonada ka qeyb qaatay maamul u sameyntii degmada Balanbale.